Kooxda Real Madrid oo Shaacisay Nambaradda ay Xiran doonaan Cayaartoydooda Cusub & dhammaan Xiddigaha Naadiga | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda Real Madrid oo Shaacisay Nambaradda ay Xiran doonaan Cayaartoydooda Cusub & dhammaan Xiddigaha Naadiga
(12-7-2017) Kooxda Real Madrid ayaa soo ban-dhigtay Nambaradda ay xidhan doonaan ciyaartoydoodu, kadib markii ay dhammeystirtay saxeexa difaaca bidix ee reer Spain Theo Hernandez, sidoo kalena waxay dib u soo ceshadeen wiilkii amaahda kaga jiray horyaalka Bundesliga ee Jesus Vallejo inkasta oo la filayo in dhawaan lagu dhawaaqo saxeexa Dani Cabellos.
Real Betis iyo Real Madrid ayaa ka heshiiyay arrinta wiilka khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Spain Dani Cabellos, kaas oo iska diiday fursad ay u soo ban-dhigtay kooxda Barcelona, mana ka mid aha ciyaartoyda la shaaciyey Namberka ay xidhan doonaan.
Ciyaartoyga Theo Hernandez ayaa wuxuu xidhan doonaa namberka 15-aad ee kooxda, halka Jesus Vallejo uu doortay inuu xidho namberka 3-aad. Real Madrid waxay lumisay dhawr ciyaartoy oo ay ka mid yahiin Pepe, Fabio Coentrao iyo Mariano Diaz, iyada oo weli aan namberkiisa la shaacin Marcos Llorente.
Sida lagu qoray Marca Fernando Llorente iyo Dani Cabellos waxay kala xidhan doonaan namberadda 18-aad iyo 24-aad, balse weli xaqiiq maaha, waxaase xaqiiq ah in xiddiga khadka dhexe ee James Rodriguez uu qaab amaah ah ugu biiray kooxda Bayern Munich.
Ciyaartoyda labada ah ee la filayo inay iskaga guuraan Santiago Bernabeu Danilo iyo Alvaro Morata ayaa ku jira liiska magacyada la soo ban-dhigay, kuwaas oo weli xidhan namberadooda.